NLD အမတ် ၄ ဦးကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကန့်ကွက် - BBC News မြန်မာ
NLD အမတ် ၄ ဦးကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကန့်ကွက်
25 ဧပြီ 2012
Image caption ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက လှည်းကူးမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်ပါတယ်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD လွှတ်တော်အမတ် ၄ ဦးဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမသာမှု လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ပြိုင်ဘက် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
NLD အမတ်တွေ ကတော့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် မဖြူဖြူသင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်(တနင်္သာရီ) ပြည်သူ့လွှတ်တောအမတ် ဒေါ်တင်တင်ရီနဲ့ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးခင်မောင်သိန်းတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်း တင်ပြီး အဲဒီအမတ် ၄ ဦးကို ကန့်ကွက်လွှာ တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကန့်ကွက်ခံရသူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းက သူတို့အနေနဲ့ တဘက်ပြိုင်ဘက်အပေါ် ဘာမှ မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်၊ အခုလို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ကန့်ကွက်တာ ကို နားမလည်နိုင် ဖြစ်ရကြောင်း ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ကန့်ကွက်ခံရတဲ့ NLD အမတ်တွေက မနက်ဖြန် ကြာသပတေးနေ့မှာ လှည်းကူးမြို့နယ် ကော်မရှင် ရုံးကို သွားပြီး သူတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ထုတ်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာဘဲ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် မဖြူဖြူသင်း ကလည်း နေပြည်တော်က ကော်မရှင်ရုံးကို သွားပြီး သူရဲ့ ပြိုင်ဘက် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အမတ်လောင်း ဒေါ်လဲ့လဲ့အေးကို ကန့်ကွက်လွှာ တင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
Copyright © 2018 ဘီဘီစီ. ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ အကြောင်းအရာများကို ဘီဘီစီမှ တာဝန်မယူပါ။. ပြင်ပ လင့်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့ ချဉ်းကပ်မှု/ လင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ.